KUFSASHADA DIGAAGGA BALAKOONKA XILLIGA JIILAALKA: MIYAAN KU HAYN KARAA, XAALADAHA XABSIGA - BEERAHA DIGAAGA
Suurtogal ma ahan in digaagga lagu ilaaliyo balakoonka
Haysashada digaag on balakoonka at jaleecada hore u muuqataa sida dhacdo cajiib ah. Laakiin haddii aad si fiican u eegto arrintan, waxay soo baxday in digaagga xaaladaha noocaas ah ay ku noolaan karaan waqti dheer iyo si joogto ah si ay u farxaan sayidadooda leh ukun cusub. Wax ka baro maqaalka sida habka loo habeeyo habkan.
Ma suurtagal tahay
Haysashada digaagga balakoonka waxay u baahan tahay diyaarinta iyo kharashka. Waa inaad xallisaa su'aalaha soo socda:
Baro naftaada ku haynta guriga iyo guri.
Qaybta maaliyadeed waa qiimaha iibka unugyada, nalalka iyo qalabka kuleylka iyo, xaqiiqda, layers. Haddii dadaalladani aysan kugu cabsiin, ka dibna digaaga ku hoyda guryaha magaalada waa suurtagal.
Si loo ilaaliyo digaagaha balakoonka, waxaa ugu wanaagsan in la doorto jilbaha sare ee wax soo saar leh iyo kuwa hooseeya oo aan u baahnayn meel badan oo bilaash ah.
Waa muhiim! Da'da ugu yar ee saamiyada dhalinyarada ee lagu hayo balakoonka waa 1 bil. Ilaa bilowga billowga wax soo saarka ukunta, digaaggu wuxuu awoodi doonaa inuu si buuxda u isticmaalo deegaanka.
Shimbirahaasi waxay leeyihiin awood u gaar ah si ay si fudud ula qabsadaan xaalad kasta. Kama cabsanayaan unugyada casriga ah iyo socodka la'aanta hawada cusub. Faa'iidooyinka layers of this caleen - hore uurjiifka (laalaabku wuxuu bilaabmaa inuu horey u socdo muddo 5 bilood ah) iyo wax soo saarka sare (sanadkiiba digaaggu wuxuu bixiyaa qiyaastii 260-300 ukumood).
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka taranta ee digaagga Leggorn.
Wakiilo ka socda noocaan, sababtoo ah dabeecadooda xasilloon, waxay noqon kartaa dad ku haboon baqshadaha baaluqa. Waxay yihiin phlegmatic iyo uma baahna fiiro badan.
Faa'iidada digaagahan ee wax soo saar badan: sanadka digaaga Haysex Brown waxay soo saari kartaa illaa 350 ukun. Shimbirahan waxay soo jiidaan maaha oo kaliya laakiin sidoo kale tayada ukunta - waxay aad u badan yihiin, miisaanka hal ukun wuxuu gaari karaa 70 garaam.
Akhri qiyaasaha ilaalinta digaagga ee Hisex Brown.
Digaagga Kuwani waa dhab "degan". Waxay yihiin cunto aan qabyo ahayn oo ku dhowaadna ha dhicin cod dheer. In kasta oo wax soo saarkooda marka la barbardhigo labadii nooc ee hore ay ka baxayaan in badan oo la doonayo - kaliya 180-200 ukumo sanadkiiba.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan caleenta digaagga ee Jubilee Kuchinsky.
Waxsoosaarista digaagga waxay ku xiran tahay oo keliya maaha, laakiin sidoo kale cuntada iyo xaaladaha xabsigooda. Si loo gaaro natiijooyin sare, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo shimbiraha balakoonka leh xaaladaha nololeed ee wanaagsan.
Balakoon waa muraayad
Digaagga ma u dulqaadanayo qabow, markaa ka hor intaadan bilaabin inaad jiifiso lakabyada, hubi inaad daryeesho gogolka balakoonka. Heerkulka hawada ee xilliga jiilaalka waa inuusan hoos udhicin 5 ° C, qiimaha taban ee looma oggola.
Waa muhiim! Shimbiraha ayaa si fudud u yareyn kara xitaa iyada oo qabow yar, sababtoo ah baqashooyin adag oo aan awoodin inay si xor ah u guuraan.
Si loo ilaaliyo wax soo saarka ukunta, digaagga waa in ay helaan qadar ku filan qoraxda - ugu yaraan 16-17 saacadood maalintii. Si aad u buuxiso cilladeeda xilliga jiilaalka, waxaad isticmaali kartaa nalal khaas ah, iibsiga kaas oo ah in la sii wado horay loo sii wado. Isla mar ahaantaana, waxaa muhiim ah in aan laqorin digaagga xagaaga - waa in laga ilaaliyaa qoraxda tooska ah.
Baqshiinka loogu talagalay digaagga balakoonka waxaa loo samayn karaa si madaxbannaan ama diyaar ah oo la diyaariyay oo ay la socdaan feederiyo iyo cabitaan. Doorashada labaad waxay faa'iido badan leedahay, maaddaama kharashka unugyada is-kaashka ah uu yahay mid muhiim ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo ilaaliyo digaagga baqshadaha iyo inaad adigu samaysan kartid naftaada.
Baqshadaha lakabka waxay noqon karaan alwaax ama bir ah. Way ka fiican tahay inaad siiso farsamooyinka birta, tan ka hooseysa qafiska noocaas ah waxaa jira saxaarada gaarka ah ee ururinta qashinka. Tani waxay sahlaysaa habka nadiifinta digaagga. Xulashada waxaa la siiyaa baqashooyin bir ah oo leh balaashad. Waxaa la isku mariyaa unugyada, taas oo u kaydisa meel bannaan oo la adeegsado balakoonka.
Ma taqaanaa? Koonfurta Ameerika, waxaa jira haad ka mid ah Ardhana Cilad ah, oo xajiya buluug buluug ah.
Cunto buuxda ayaa kaa caawin doonta dadka baaluqsan ee balakoonka si ay u ilaaliyaan waxsoosaarkooda muddo dheer waxayna iska ilaaliyaan cudurrada. Quudinta digaagga:
hadhuudh (sarreen, galley, shaciir, masago);
khudradda asaasiga ah (karootada, xididada);
macdanta macdanta (hilibka iyo lafta iyo / ama cuntada kalluunka, qolof).
Digaagga ku yaal balkoonkaaga waa inaysan ku dhibin kireystayaasha kale. Sidaa darteed:
nadiifinta nadiifinta maalin walba si looga fogaado urka aan fiicnayn;
ka taxadar buuqa buuqa, ama bilaabo qaar ka mid ah lakabyo aan lahayn lafo, sidaas darteed waxaa jiri doona buuq badan;
Ka ilaali digaagga ka yimaada booqashada shimbiraha duurjoogta ah: tan arinta, balakoonka balakoonka iyo ha ilaawin shabakada kaneecada.
Digaagga balakoonka - xal fiican oo loogu talagalay kuwa daryeesha caafimaadkooda waxayna raadiyaan inay cunaan cunto dabiici ah. Xitaa xaaladaha guri dabaq ah ee magaalada, digaaggu way dareemi karaan raaxo haddii ay mas'uul ka yihiin meelaynta.
In ka badan laba ka mid ah ma bilaabaan oo soo baxaan marar badan, waxayna noqon doonaan wax aan fiicneyn. 15 gogo 'oo ku noolaa loggia laba makhaayad ah muddo 1.5 bilood ah - qiiqa oo dhan ayaa gurigeyga galay, in kastoo la nadiifiyey 2 jeer maalintii oo daaqaduna waxay ahayd mid aad u kacsan.
90-maadkii "gaajada" ee ka soo baxa balbaliyooyin badan ayaa la maqlay "ku-ka-d-ku". Oo waxaan u leexday xagga baryada ilmo, waxaannu isaga ku iibsaday laba weel oo jaale ah. Muddo ka dib, deriska waxay bilaabeen inay la yaabaan dhoola-cadeyn: goorma ayaan cuni doonaa? Aniga nafteyda waan ku faraxsanahay, - Waan fahmay, laakiin goor dambe, - cuduradaan, qoob-ka-shaqeeyayaasha, qeyliyaan sida haddii lagu dhawaaqay. Hadday ka fogaatay ehelkeeda meelo uu ku sugnaado. Nasiib wanaag, waxaan leenahay hal digaag.
Marka laga eego aragtidan, caajisku waa uun ilo buuq ah, wax kastoo ay ka muuqato ... wuxuu bilaabaa qeylo badan ka hor waqtiga "saxda ah". Laakiin dhibaatooyinka ka yimaadda wasakh ama qoob ka soo laba digaagga, ma xasuusto.